Dagaal Culus oo u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo Ciidamada Dowlada oo ka dhacay Magaalada Muqdisho « AYAAMO TV
Dagaal Culus oo u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo Ciidamada Dowlada oo ka dhacay Magaalada Muqdisho
513 Views Date February 8th, 2014 time 10:04 am
Waxaa Habeenkii xalay Dagaal Culus oo la isku adeegsaday hubka Nuucyadiisa kala duwan ka dhacay Xaafada SOS ee Degmada Hiliwaa kaa oo u dhaxeeyay Dagaalyahano hubeesan oo katirsan Al-Shabaab iyo Ciidanka Dowlada.
Dagaalka ayaa qarxay xili dadka badankii ay hurdeen waxa uuna ka dhashay weerar ay rag hubeesan oo katirsan AL-Shabaab ku qaadeen fariisimo Ciidanka Dowlada ku lahaayeen Degmada Hiliwaa.
Lama oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalka xalay Degmada Hiliwaa ku dhax maray Dagaalyahanad Hubeesan ee Xarakada Al-Shabaab iyo Ciidamo katirsan Dowlada Soomaaliya.
Ciidamada Dowlada ayaana saakay wada baaritaano ay ku baadi goobayaan ragii hubeesnaa ee weerarka Culus kusoo qaaday , Dhalinayro laga shakisan yahay ayaa lasoo warinayaa in Ciidanka Dowlada gacanta ku dhigeen.
Degmada Hiliwaa waxaa inta badan ka dhaca Weeraro ay dagaalyahanada AL-Shabaab ku qaadaan fariisimaha Ciidanka Dowlada ee Degmadaasi , Maalin kahor ayey aheed markii ciidanka Dowlada howlgalo ay Degmadaasi kasameeyeen ku xir xireen boqolaal Dhalinayro ah ay kaga shakiyeen in xiriir la leeyihiin Al-Shabaab.